विदेशी मुद्राको ऋण ल्याउन चुनौती
चार गुणासम्म पुँजी वृद्धि गरेका बैंकहरूले आक्रामक भएर लगानी गर्दा पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सीसीडी) अनुपात कसिलो भयो । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नका लागि निक्षेप बढाउनुपर्ने भयो । बैंकहरूसँग लामो अवधिको लगानी गर्न पैसा नभएपछि कर्जा लगानीमा समेत नियन्त्रण गर्नुप¥यो । बैंकहरूले निक्षेप बढाउनका लागि ब्याजदर बढाएर पनि हेरे ।
कृषिक्षेत्रका लागि विशेष योजना ल्याउँछौं
सिरहाबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विजय यादवले जनकपुरस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पसबाट आईएस्सी गरेका हुन् । २०४७ सालदेखि नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका आर्थिक मामिला तथा वाणिज्य मन्त्री विजय यादवले बीएस्सी इन्जिनियरिङ भारतको विहारको पटनाबाट गरेका हुन् । त्यसपछि यादव २०६३ मा तराई–मधेसमा भएको पहिलो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व आफ्नै गृहजिल्ला सिरहाबाट गर्र्दै मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलमा सक्रिय भए ।
समृद्धिका लागि सरकार–निजी क्षेत्र हातेमालो
निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५२ औं वार्षिक साधारणसभा राजधानीमा जारी छ । बुधबार सुरु भएको साधारणसभा आज सम्पन्न हुनेछ ।
पूर्वाधार, सार्वजनिक वित्त र कानुनहरूमा संरचनागत सुधार गर्न सक्नुपर्छ
डा. स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका वाग्लेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै राजीनामा दिएका हुन् । उनी अर्थतन्त्र र योजनाका विज्ञसमेतहुन् ।
तीनै तहको निर्वाचनपछि बनेको बाम गठबन्धनको सरकारले हालै मात्र सरकारको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेको छ । श्वेतपत्रले भनेजस्तो हालको आर्थिक अवस्था कहालीलाग्दो नदेखिएको र एउटा ट्रयाकमा आइसकेकाले काम गर्न सहज हुने अर्थविद् डा. शंकर शर्माको बुझाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल ५६ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । यी संस्थाले २५ लाख ७७ हजार सर्वसाधारणलाई सदस्य बनाई सेवा पु¥याएको देखिन्छ । तर, लघुवित्त कम्पनीहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुँदा धेरै व्यक्ति एकभन्दा बढी कम्पनीमा सदस्य भई कारोबार गर्ने गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा तीन दिने राजकीय भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कँदैछन् । संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध खरो उत्रिएका ओलीको भ्रमणलाई नेपालमा महत्वका साथ हेरिएको थियो । भ्रमणका क्रममा खासै नयाँ सहमति नभए पनि पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा बढी जोड दिइएको छ । दुवै प्रधानमन्त्रीले शनिबार १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।
कारोबार आर्थिक बहस - प्रदेश ५
प्रदेश नम्बर ५ पर्यटन देखि लिएर, उद्योग, ब्यबसाय कृषी हरेक कुरामा राम्रो रहेको प्रदेश हो । बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी यही प्रदेशमा रहनु ठुलो गौरबको बिषय हो । लुम्बिनीका माध्यमबाट बिदेशका लाखौ पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ । देशलाई सम्बृद्धीको बाटोमा डोरयाउने एउटा पाटोनै हो लुम्बिनी ।
स्वदेशी पुँजीबाटै २ हजार मेगावाटको हाइड्रोपावर बनाउन सकिन्छ
नेपालका अधिकांश पुराना व्यावसायिक घराना उत्पादनमूलक उद्योगबाट ट्रेडिङ व्यवसायतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला एमभी दुगड ग्रुप भने यसमा अपवादजस्तै देखिएको छ । खाद्यान्नबाट व्यवसाय सुरु गरेर अटोमोबाइल क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय यो समूहले यतिबेला सम्पूर्ण ऊर्जा हाइड्रोपावरमा लगाएको छ । यस समूहको नेतृत्व भने उद्यमी मोतीलाल दुगडले गरिरहेका छन् ।
जलाधारको दिगो व्यवस्थापनबाटै जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन सकिन्छ
नेपालको भौगर्भिक अवस्था, भिरालो भू–बनोट र अधिक मात्रामा हुने मनसुनी वर्षाले गर्दा प्राकृतिक रूपमै भू–क्षय, पहिरो तथा बाढीको प्रकोपको समस्या छ । वनविनाश, अनुपयुक्त भू–उपयोग, अवैज्ञानिक खेती प्रणाली, अव्यवस्थित पशुपालन र वातावरणीय विनाश, वातावरणमैत्री विकास–निर्माण नहुनुजस्ता मानवीय क्रियाकलापले भू–क्षयको समस्यालाई अरू जटिल बनाएको छ । फलस्वरूप खेतीयोग्य जमिन नाश हुनुका साथै मलिलो माटो बगेर जाँदा भू–उत्पादकत्वमा कमी भई खाद्यान्न उत्पादनमा समेत ह्रास आइरहेको छ ।
कर्णालीमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आए हुन्छ
तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धमा होमिएका र माओवादी सेनाको कुनै समूहको नेतृत्व गरेका महेन्द्रबहादुर शाही अहिले कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । कालिकोटबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित शाही यसअघिका ऊर्जामन्त्री समेत भइसकेका छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा सबैभन्दा कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेशलाई जलविद्युत् उत्पादनमार्फत समृद्ध बनाउने उनको योजना छ ।
कारोबार आर्थिक बहस- कर्णाली प्रदेश
अहिले नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा सम्प्रेषण गर्ने हो । हतारो पनि छ तर दौडन पनि सक्दैनौं । बाँधिएका छौं र पनि आतुरता छ । कानुन स्पष्ट छैन । प्रतिबद्धताले मात्रै दोडन सकिँदैन रहेछ । पहिलो त प्रदेश सरकारको फाउन्डेसन बनाउन लागेका छौं ।
काराेबार आर्थिक बहस - प्रदेश ७
मुलुकमा विकास नहुनुमा श्रोतको भन्दा सोचको अभाव हो । त्यसैले विकासका लागि सोच बदल्नु आवश्यक छ । प्रदेश ७ मा कुल देशको एक तिहाई जलविद्युत्को सम्भावना छ । ६ हजार ४ सय ६० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीलगायतका थुप्रै परियोजना प्रदेशमा छ ।
श्वेतपत्रमाथि थरिथरीका टिप्पणी
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेपछि श्वेतपत्रबारे अनेक टकिाटिप्पणी आउन थालेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री खतिवडाले वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुमोदन भएको भन्दै मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए ।
सेयर बजारमा संस्थागत सुधार आवश्यक
पछिल्ला दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ९नेप्से० परिसूचक निरन्तर ओरालो लागेको छ । सरकारले ल्याएको श्वेतपत्रले पनि सेयर बजारलाई सतही अवस्थामा रहेको भनेपछि लगानीकर्ताको मनोबल झनै कमजोर भएको आइतबारको कारोबारले स्पष्ट हुन्छ । आइतबार मात्र सेयर बजार परिसूचक २४ अंकभन्दा धेरैले घटेको छ ।